Boeing omisha xiyyaara 737 Max dhaabu akka danda'u akeekkachiise - BBC News Afaan Oromoo
Boeing omisha xiyyaara 737 Max dhaabu akka danda'u akeekkachiise
Boeing xiyyaroota akka hinhojjannee taasisuun yeroo dheeraaf kan itti fufu yoo ta'ee omisha 737 Max dhaabu akka danda'u akeekkachiise.
Kaampaanichis gabaasa Roobii darbe dhiyeesseen sababii balaa xiyyaarotaan wal qabatee kurmaana keessatti kasaaraan dolaara biliyoona 3.4 irra gaheera. Kunis, kasaaraa guddicha dhabbatichi kurmaana tokko keessa dhabedha.
Dhiibbaan to'attota balallii kan itti fufu yoo ta'e Boeing omisha 737 Max hir'isuuf ykn gutummaatti dhaabuuf akka yaadu himeera.
Haa ta'u malee, itti gaafatamaan Boeing Denis Mulenbarg xiyyaarichi Onkololeessatti gara qilleensaatti akka deebii'u abdatu.
Boeing ammoo xiyyaaroota 737 Max hunda baatii Bitoteessaatii erga balaan xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa qaqqabuun namoota 157 galaafatee booda akka dhaabbatu taasifameera.
Gosti xiyyaaraa 'Boeing 737' Max-8' maali?
Baatii shaniin dura, Boeing 737 Max kan Daandii qilleensa 'Lion' tiin gaggeefamu kufee caccabuun namoonni 189 lubbuusaanii dhabaniiru.
Qorannoon balaa xiyyaarota lamaanuu gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, Boeing ammoo rakkina softi weerii to'annoo balaliinsaa fi dhimmoota biraa Bulchiinsa Aviyeeshinii Federaala US dabalatee to'attootaan adda baafame sirreessuuf hojjataa jira.
Dhaabbanni Boeing kan hanga ammaatti mirkanneesse qaama to'attootaa eeggataa jiruus, warra 737 Max tti fayyadaman waliin torbaniif haasawa bilbilaa taasisaa jiraachuufi softi weeriin fooyyeeffamees balaliinsawwan 225 irratti yaalamu himeera.
Balaa xiyyaarotaa lamaatiin booda, baay'inni omisha 737 Max ji'atti xiyyaara 52 irraa 42 gadi bu'eera, akka Obbo Mulanbarg dubbataniitti.
Wayita ammaattis Boeing kan duraa caalaa qaama xiyyaaraatiif baasii hedduu baasuuf dirqameera haaluma gatii omishtoota xiyyaaraatiin baafameen.
Kana malees xiyyaarota haaraa 737 Max daandiiwwan qilleensaatiif dhiyeessaa waan hinjirreef galiifi bu'aan dhaabbata Boeing garmalee miidhameera.
Kanaafuu, kana booda oomisha xiyyaarichaa hir'isuun oomisha 737 Max gutummaatti dhaabuuf geessuuf qaqqabsiisuu danda'a jedhameera.